Goobaha Khadka Tooska ah ee Finish-ka - Xeerarka gunnada ee Khadka Tooska ah ee Khadka
(753 votes, celcelis ahaan, 4.00 out of 5)
Si ka duwan Imaaraatka carabta iyo dalal kale oo badan, gudaha Finland maaraynta khamaarka waa dowlad goboleed awood leh. Lacagta laga kasbado bakhtiyaa-nasiibka, mashiinada jeexjeexa iyo kaararka casriga, waxay u baxaan baahi bulsho iyo sadaqo.
Maanta Finland waxaa jira hal naadi oo dhab ah - Grand Casino Helsinki (Grand Casino Helsinki). Xaruntan khamaarka waxay ku taal bartamaha caasimadda Finland, wadada Mikonkatu. Waxaad halkaas ku gaari kartaa nooc kasta oo gaadiid ah.
Grand Casino Helsinki waxay ku taalaa dhisme cusub oo dib loo dhisay oo taariikhdiisu ahayd bilowgii qarnigii 20aad. Baaxadda dhulkeedu waa 2500 m2. Meeshan waxaa ku yaal in ka badan seddex boqol oo mishiinno naadi ah, naadi turub iyo 20 miis oo loogu talagalay ciyaaraha kale (roulette, Black Jack, Texas Hold'em, Punto Banco), saddex baarar iyo laba maqaaxiyo.
Liiska ugu sareeya 10 Meelaha Kubadda Cagta ee Finishka
Kasiinadu waxay albaabada u furtaa maalin kasta 12:00. Si kastaba ha noqotee, miisaska kaararka "tooska ah" waxay bilaabaan inay shaqeeyaan kaliya 13:30. Ilaa waqtigan, ciyaartooyda waxaa kaliya oo la heli karaa burcad hal gacan ah, miisaska turubka elektarooniga ah iyo roulette TouchBet. Albaabka laga soo galo ayaa rasmi ahaan lacag la'aan ah, laakiin adeegyada dharka ayaa ku kici doona € 2. By habka, sharadka ugu yar ee casino waa sax isku mid ah.
Dadka ku xardhan casino sanadka 18 looma maleynayo, iyo sidoo kale jaaliyadaha ku labisan dharka isboortiga oo aan loo wareejin dharka dibadda illaa gardarrada. Waa in la ogaadaa in xukunka wajiga ee Helsinki Casino Grand Casino uu yahay mid daacad ah oo degan oo ku saabsan jilibka, laakiin ma seegayo kuwa la garaacay iyo kuwa aan qashinka laheyn.
Hada hadalo yar oo ku saabsan lacag. Helsinki Casino Grand Casino, dhammaan xisaabinta waxaa lagu sameeyaa oo keliya euro. Barkadaha iyo makhaayadaha ayaa aqbalaya bixinta labadaba kaararka iyo lacagaha, laakiin bustayaasha cas cas ayaa lagu bedelay kaliya lacagta ribada ah ee Yurub. Hase yeeshee, tani macnaheedu maahan inaad u baahan tahay inaad tagto hay'ad leh jeebad buuxa oo kaash ah. Si fudud ayaad ula imaan kartaa kaar caag ah oo aad ka baxdid lacagta caddaanka ah ee laga helo ATM-yada xaafada, oo ku taal miiska soo dhaweynta.
Sida aan kor ku soo sheegnay, Grand Helsinki Casino ma ahan oo keliya hoolka khamaarka. Baararka iyo maqaayadaha si wanaagsan ayaad wax uga cuni kartaa, ka daawan kartaa telefishanka baahinta tartamada isboortiga iyo dhageysiga muusikada tooska ah. Intaa waxaa dheer, maqaayada Fennia Salon waxay si joogto ah u martigelisaa barnaamijyo muujinaya, oo ay ka soo qayb galaan kooxo caan ah oo caan ah. Qiimaha tikidhada ee "show + casho" wuxuu u dhexeeyaa 50 ilaa 100 €.
Kasiinada iyo doomaha Marka lagu daro khamaarka weyn ee weyn, Finland waxaa ku yaal hoolal badan oo yar yar oo "Potti" ah iyo shabakad naadiyo naadi ah "Club RAY". Marka ugu horeysa ma jiraan miisas kaarar dhab ah, sicirraduna kama badnaan karaan 20 €. Naadiyada "Potti", sida caadiga ah, waxay ku yaalliin xarumaha dukaamaysiga waxayna leeyihiin jadwal shaqo oo isku mid ah. "Club RAY", waxaa jira xaddidaadyo sicirka, laakiin ma haystaan ​​oo keliya mashiinno, laakiin sidoo kale miisaska kaararka "nool". Naadiyada ugu waa weyn ee shabakadan waxay ku yaalliin Jyväskylä (Kauppakatu 41) iyo Turku (Eerikinkatu 10).
Sidoo kale rasmi ahaan Finland waxay leedahay dhowr "casinos dul sabeynaya". Kuwani waa doomaha yaryar ee ku qalabaysan miisaska lagu ciyaaro roulette, turub iyo blackjack. Waxay u soo muuqdeen isla markiiba ka dib markii laga mamnuucay casinos-ka Russia, waxayna ku xirnaayeen St. Petersburg, laakiin ciyaarta waxay ku bilaabaneysaa oo keliya biyaha dhexdhexaadka ah ama finland.
Intaa waxaa dheer, in shirkadaha Finns ay filayaan inay furaan khadad kale oo weyn oo ku yaala Bariga Finland, oo u dhow xuduudda Finland iyo Ruushka. Furitaanka waxaa loo qorsheeyay 2015.
Maanta, waxaan sii wadeynaa dhaqankeenii aan ku dhex mari jirnay Yurub. Waxaan horey u booqannay Prague, Tallinn, Minsk, Warsaw, Vilnius iyo Riga. Markan CasinoToplists waxay kugu martiqaadayaan inaad booqato waddanka quruxda badan ee waqooyiga Yurub, oo leh wabiyaal iyo harooyin badan - Finland. Waxaan barannaa waxyaabo badan oo xiiso leh sida waddanka laftiisa, iyo sidoo kale khamaarista. Marka safarkeena dalxiis ayaa bilaabmaya!
Finland - in yar oo juqraafiga ah iyo taariikh ah;
Casinos dhulka ku yaala xilligan xaadirka ah: dowlad-goboleedka;
Kasiinooyinka ugu caansan - «Grand Casino Helsinki»;
Shan goobood oo Helsinki ah oo Helsinki ah oo leh cinwaanno;
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan dadka Finnishka ah iyo Finland.
Taariikh kooban oo Finland ah
Degmooyinka ugu horreeya ee ku yaala dhulka Finland ee casriga ah ayaa soo muuqday xilligii barafka, oo ku saabsanaa 8,500 sano BC.
Taariikhda gobolkan waxaa si aan kala go 'lahayn ugu xiran deriskeeda: Iswiidhan iyo Ruushka. Dhowr qarni ayaa dalka Finland waxaa xukumayay Iswiidhan, 5tii Sebtember 1809 Iswiidhan waxaa lagu qasbay inay heshiis nabadeed la saxiixato Alexander I.
Tan iyo markii Finland lagu daray Ruushka. Laakiin muddo dheer - durba Diseembar 4, 1917 ayaa lagu dhawaaqay xorriyadda.
Ciyaaraha «Grand Casino Helsinki»
Khamaarista ka jirta Finland lama mamnuuco, laakiin dowladda ayaa kaligeed iska leh. Tani waxay ka dhigan tahay in dhammaan dakhliga ka soo gala khamaarka uu yahay miisaaniyadda dalka ee sadaqadda, iyo sidoo kale barnaamijyada caafimaadka iyo bulshada.
Waxaa jira waxa loogu yeero Association RAY (mashiinada ciyaaraha) - inay iska leedahay khamaarka kaliya ee dalka ka jira iyo dhammaan mashiinnada lagu ciyaaro.
Ugu dambeyntiina, dhammaan dakhliga ka soo gala khamaarka waxaa soo uruuriya oo qaybiya guddi gaar ah oo ah heerka 70% baahida dhammaan noocyada ururada samafalka ah ("Ururka Naafada", "Midowga Agoonta" iyo ururada kale), halka 30% waxaa lagu kharash gareeyay dayactirka khamaarka iyo shaqaalaha mushaarka.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagula socdaa muwaadiniinta: waxaad u tagi kartaa casino kaliya markaad gaarto 18 sano jir. Iyo haa, u diyaargarow in booqashada ugu horeysa ee lagu weydiisto baasaboor iyo sawir - waxaad u baahan tahay inaad sameyso "Kaarkaaga Macluumaadka Macluumaadka".
Dharka-labiska ayaa ah mid dimoqraadi ah - waxaad xiran kartaa wax walba marka laga reebo tracksuit iyo kabo isboorti. Laakiin dharka waxaa lagaa codsan doonaa inaad ku wareejiso dharka.
Waxaa loogu yeeray waddanka ugu casaweyn «Grand Casino Helsinki» . Waxay ku taal caasimadda Finland, dhisme duug ah oo dhowaan la dayactiray daarihii hoteelada - «Fennia» («Fenniya”) ee Mikonkatu 19. Kasiinadu waxay furan tahay laga bilaabo 12.00 illaa 04.00.
Halkaan, taageerayaashu waxay ku ciyaaraan ciyaaro nasiib u leh inay bixiyaan casinos American, Baccarat, Black Jack, Red-Dog, Oasis Poker.
Haddii aad doorbideyso mashiinnada ciyaarta, 300 ka mid ah xulashooyinka waxaad hubaal ka heli doontaa naftiisa wax ay jecel yihiin. Gaar ahaan caanka ah Derby Horse, Touch Bet Roulette iyo Poker Lightning.
Taageerayaasha cayaaraha kaararka waxay awoodi doonaan inay shirkad ka raadsadaan Texas Hold'em, Omaha iyo noocyo kale oo turub ah. Waxay martigelisaa tartamada toddobaadlaha ah iyo dhammaadka toddobaadlaha ah iyo tartamada caalamiga ah, 2 jeer sanadkii.
Fadlan ogow - casino wuxuu ku bixin karaa oo keliya lacag caddaan ah, laakiin makhaayadda, kaarkaaga deynta ayaa aad ugu habboon habka habka lacag bixinta. Lacagta hadda jirta - euro.
Qaar badan oo raba inay ciyaaraan halkan waxay ka raacayaan St. Petersburg. Weli, wadada baabuurku waxay qaadataa 3-6 saacadood (waxay kuxirantahay xadka). Tareen “Allegro” oo ka yimid St. Petersburg ayaa halkaan xitaa kugu dheereeya - kaliya 3:00. Intaas waxaa sii dheer, helitaanka fiisada Finland ma sahlana.
(Senateintori) iyo xarunta magaalada. Bartamaha fagaaraha waa taallada Alexander II, maxaa yeelay waxay kuxirantahay shakhsiyadiisa bilowga qaranimada dalka. Waxa kale oo ku yaal Cathedral weyn, Maktabadda Qaranka iyo Qasriga Madaxtooyada. Meel u dhow waa Warshad dhaqameed Korjaamo, halkan waxaa ku yaal sawirro - iyo bandhigyo farshaxan iyo matxafyo ku yaal taraamyada.
Winter Garden. Cinwaanka: Hammarskjöldintie, 1A. Tani waxay daboolaysay dhammaan noocyada dhirta lagu koriyo iyo ubaxyada la abuuray qarnigii 19aad, Sarreeye Gaas Jakob Lindfors. Isaga weeye kan raba inuu albaabku halkan ka ahaado mid bilaash ah, oo bilaash ku ah dhammaan kuwa imanaya - dhaqankan ayaa soconaya ilaa maanta. In ka badan 200 oo dhir ah oo adduunka ka kala yimid ayaa isugu yimid halkan hoolalka mowduucyada waxayna ka yaabiyaan qof walba sanadka oo dhan. Maalinta fasaxa - Isniinta. Saacadaha shaqada - illaa 15.00, dhammaadka usbuuca - ilaa 16.00.
Beerta xayawaanka ee Helsinki. Cinwaanka: Helsinki Wanaagsan markaa Mustikkamaanpolku , 12 . Waa “Zoo Helsinki Zoo” oo ku taal jasiiradda isla magaca ah. Waxay ku dhacdaa xoolaha badan (ilaa 200) iyo dhirta (ilaa 1000) oo ka kala yimid adduunka oo idil. Ficil ahaan, halkan waxaa matalaya tusaalaha adduunka oo dhan, iyo dadka deggan ee ku nool. Xilliga kuleylaha halkan waxaa lagu imaan karaa doonta.
Sea World « Badda Life » Cinwaanka: Tivolitie 10. Aquarium-kan oo ah qaab tunnel ah, kaas oo ku safri doona noocyo kala duwan oo nolosha badda ah oo kaa sarreeya. Waa matxafka nolosha badda ee Linnanmäki, oo baaxaddiisu dhan tahay 250 mitir murabac. mitir oo ay ku jiraan 50 aquariums.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Finland iyo Finns
Wadanku wuxuu leeyahay laba luqadood oo rasmi ah: Finnish iyo Iswidish;
Finland sidoo kale waxaa loo yaqaan "Suomi", oo macnaheedu yahay "dhul bogs". Waxaa jira ku dhowaad 189.000 harooyin iyo 179.500 jasiiradood;
5 milyan oo qof oo dalka ku nool ayaa dhisay in ka badan 2 milyan oo saunas ah, waa mid ka mid ah waxqabadyada ay jecel yihiin dadka reer Finland. Xitaa waxaa jira nooc kaftan ah, “Finn wuxuu noolaan karaa sawn la'aan. Laakiin ma aha muddo dheer. “
Ganaaxyada dembiyada taraafikada waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo ku xiran heerka dakhliga qofka dembiilaha ah: Dakhliga ka sareeya dakhliga soo gala, waa in ka badan inta uu bixinayo;
73 maalmood koonfurta Finland “Habeennadii Caddaa” ee ugu dambeeyay - qorraxdu ma dhacdo xilligan;
Dadka Finnishka ah waa waddan weyn oo dalkooda ah, waxay u badan tahay inay iibsadaan alaab guri oo qaali ah marka loo eego soo dejinta raqiis;
Dadka Finnishka ah waxay ku faanaan waxyaalladooda caanaha waxayna aad u jecel yihiin miraha;
Santa Claus oo uu ugu yeeray Finnish Joulupukki, wuxuuna leeyahay xaas Joullumuori (taas oo macnaheedu yahay jir-gaboobay);
Luqadda Finnishku way adag tahay, 14 kiisaska firfircoon iyo 2 kiisas badan, taas oo loo tixgelinayo in aan la tirtirin.
Finland khariidada Yurub
0.1 Liiska ugu sareeya 10 Meelaha Kubadda Cagta ee Finishka
1 Khamaarista Finland
1.0.1 Taariikh kooban oo Finland ah
1.1 Ciyaaraha «Grand Casino Helsinki»
1.1.1 Soojiidashada Helsinki
1.1.2 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Finland iyo Finns
1.1.3 Finland khariidada Yurub
bella vegas ma jiro koodh gunno ah oo gunno ah